Alahlwayo Maski, FFP2 / FFP3 KN95 Vuvu, zokhuseleko Coverall - Ah-Centre
I-AH-CENTRE CO., LTD ilandela iimveliso zesiphene; babambelele kwimveliso nakwezobuchwephesha ukuze babambe imarike ephezulu yamazwe aphesheya, ikakhulu ithengiselwe iJapan, iYurophu neUnited States, mpuma Asia kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Ngeli xesha, ii-odolo zakho ze-OEM ODM zamkelekile. Sizama ukuphanda, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nokuhambisa iimveliso ezingalukwanga.
Imaski yobuso obucabalele
Imaski yonyango esetyenziswa ngoochwephesha kwigumbi lokusebenza okanye ezinye iisetingi zonyango ukunciphisa umngcipheko wokusasazeka kosulelo, ngakumbi kubhubhane okanye kwimeko zobhubhane. Ikwakhusela umntu onxibayo ngokuchasana nolwelo olunokubangcoliseka kwimeko ethile.
Ithemometha elingafakwanga umlinganiso weqhosha elinye, ukusebenza okulula kwabantwana kunye nobudala Usebenzisa inzwa ye-infrared ephezulu, ukuqokelela ngokuzenzekelayo iiseti ezininzi zedata lobushushu bomzimba kunye nokulinganisa okunengqiqo, umlinganiso ngokuchanekileyo ngakumbi kwaye ukusebenza kuzinzile kwaye kuthembekile
I-KN95 / FFP2 ngobuso bokucoca imaski (inqanaba lokususa uthuli) lingaphezulu kwama-95% kwizinto ezingenaoyile, kwaye izinto zokucoca zingenabungozi emzimbeni womntu.
* Iiluphu zelaphu eziphakamileyo ezi-elastic zintofontofo kwaye azingqinelani.
* Isiqwenga sempumlo esinokuhlengahlengiswa sinceda imaski igubungele ubuso bomsebenzisi ngokufanelekileyo.
* Indawo eqinileyo ye-ultrasonic welding ecofa ngokucinezelwa kwendlebe eyomeleleyo kunye nemilo entle.
* Isinxibo se-SMS esilahlayo esikhuselweyo senziwe ngezinto eziphezulu. Inomsebenzi wokuchasana nentsholongwane, ukuphefumla, ukuthintela i-osmosis, ukungangeni manzi, kwaye ayinamandla.
* Isuti ekhuselayo ekhuselayo ikhululekile ukunxiba zombini ubungqina bamanzi kunye neempawu zokuphefumla.
* Ukutywina ubushushu ngerabha ye-SMS yenza elona nqanaba liphezulu lokukhusela.
* Iminyaka emi-2 yobomi obude kwaye kulula ukuyishiya, iyenza ibe yindawo enobuhlobo.
I-AH-CENTRE CO., LTD yasekwa ngo-2020 eHefei, kwiPhondo laseAnhui, kuphando kunye nophuhliso lwemveliso kunye nentengiso njengenye yamashishini anamhlanje. Ukusukela oko yasekwa, inkampani ikhula ngokukhawuleza, umzi-mveliso ugubungela indawo yokuvelisa iyonke ejikeleze i-248,000 yeemitha zesikwere .Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya imaski yobuso yotyando, imaski yonyango, i-Kn95 Face Mask, imaski ye-FFP2, imaski ye-FFP3, indebe yemaski yobuso, i-infomred thermometer, imiwundu yokuzihlukanisa, Sinezixhobo zemveliso eziphambili kunye nezixhobo, abasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nentengiso enamava.
Nika ukudlala okupheleleyo kumandla ngamnye omqeshwa ngamnye
Ukuqesha nokukhuthaza abantu abafanelekileyo
Ukukhuthaza nokukhuthaza ukukhula kwezakhono zomntu ngamnye
Nika ingxelo eqhubekayo eyakhayo
Khuthaza abasebenzi ukuba bavelise izinto ezintsha kwaye batshintshe
Yenza indawo efanelekileyo yokusebenza
Chonga kwaye uvuye umsebenzi ogqwesileyo
Nikezela ngembuyekezo yokhuphiswano kunye neephakheji yezibonelelo
Ukhuthazo oluqhubekayo lonxibelelwano lweendlela ezimbini
Vumela umthengi azive anelisekile
Qonda umbono wabathengi kunye nesicwangciso
Qhubeka uphucula iimveliso zethu, iinkonzo kunye neenqobo ezisemgangathweni
Lindela kwaye uhlangabezane neemfuno zabathengi
Ukuseka umanyano lwabathengi kunye nabanikezeli ngeenkonzo
Ukuphuhlisa ishishini lethu
Ukuphucula inzuzo yexesha elide
Yandisa isikali seshishini lethu kunye nabathengi
Hlala utyala imali kwiimveliso ezintsha, iinkonzo kunye nenkxaso
Isenzo sokubambelela kwinkqubo yokuziphatha
Ukwenza ngokunyaniseka nangengqibelelo
Yixabise intembeko nokuhloniphana
Khuthaza iyantlukwano kunye noxabiso ngokwenkcubeko kubasebenzi
Isidingo sokukhusela nokukhathalela uluntu kunye neendawo ezingqongileyo